GreenWithEnvy: NVIDIA GPU Kuwedzeredza Software | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | vatyairi, Graphics, Zvirongwa
Isu tataura kare kakati wandei pamusoro pezvirongwa kana zvishandiso zvekuwedzeredza kubva kuGNU / Linux kugoverwa mune rimwe remablog edu. Nhasi zvakare tinodzokera kumusoro uyu unofarira akawanda ozeros anoda kureruka uye kutonga kuita overclocking pamachipisi ayo, angave maCPU kana maGPU. Mune ino kesi, tinouya kuzopa chirongwa cheavo vane kadhi yemifananidzo yeGeForce kubva kuNVIDIA.
GreenWIthEnvy chirongwa ichocho, rakavhurika sosi, yemahara, yemahara uye yakagadzirwa nharaunda. Iyo nharaunda iriko yekupindura kana makambani asingagadzire zviri pamutemo software yemaitiro aya uye nezvimwe zvepuratifomu yedu, iyo dzimwe nguva inokanganikwa zvakadaro nevakagadziri vakuru. Nechirongwa ichi, iwe unozogona kudzora tembiricha, fani kumhanya, wachi frequency, ita diki yekuwedzeredza uye zvimwe.
Zvese zvakapindirwa mune imwechete chishandiso uye yakavakirwa pa Yakanaka yakapusa uye inonzwisisika GUI. Rangarira kugonesa "Coolbits" kuti ikwanise kushandisa humwe hunyanzvi husingatsigirwe neNVIDIA GPUs paLinux. Nekudaro, kana iwe uchida rumwe ruzivo nezve iyi pasuru, iwe une zvese zvaunoda mune yayo peji yepamutemo. Ikoko iwe unowana zvepasirese mapakeji ekugona kuzviisa nyore mune chero kupi kugoverwa, sezvo vari Flatpak. Huya, izvo zvimwe zvakapfava zvinenge zvisingaite! Uye zvese izvi muLinux, nekuti vashandisi veWindows vanogona kunge vachishandiswa pane izvi zvivakwa, asi muLinux unofanirwa kushanda zvimwe zvese ...
Ehezve, kana iwe ukaita aya maitiro, rangarira zviite nokungwarira, uchiziva zvauri kuita uye uri pasi pebasa rako, nekuti unogona kukuvadza michina yako. Kana ikaitwa nemazvo, haifanire kukonzera matambudziko, asi chenjera nekuwandisa kwehuwandu hwezvinetso izvo zvinogona kukonzera reboots nekuda kwekusagadzikana, kuwedzera kunooneka kwekushisa (iwe uchafanirwa kugadzirisa iyo kutonhora system), uye mune dzimwe nguva, siya chip …
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » GreenWithEnvy - NVIDIA GPU Kuwedzeredza Software